Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng Yariisow) ayaa wuxuu sheegay inay jiraan xildhibaano ku hawlan sidii ay damiin uga soo deyn lahaayeen dadkii dilay, islamarkaana gubay Axmed Muqtaar (Dawlo). Wuxuu sheegay madaxda qaranka in...
Qaar ka mid ah taliyeyaasha booliska saldhigyada Muqdisho oo xilalka laga qaaday Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Bashiir Cabdi Maxmed ayaa xilka qaadis ku sameeyay Todobo ka mid ah taliyeyaasha saldhigyada booliska degmooyinka gobolka Banaadir. Taliyeyaasha xilalka laga...
Galmudug garabka uu hoggaaminayo Madaxweyne ku xigeenka Maxamed Xaashi Cabdi Carabey ayaa soo dhaweeyay shirka Madaxweynaha Soomaaliya ugu yeeray madaxda Galmudug. Warqad ka soo baxday xafiiska madaxweyne kuxigeenka ayaa waxaa lagu sheegay dhibaatada heysata Galmudug inuu ka...
Alshabaab oo Sheegtay in ay qarax ku Dileen Askar ka tirsan Dawlada
Qarax nuuciisa lagu sheegay inuu ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa ciidamo ka tirsan dowladda waxaa maanta waxaa lagula eegtay wadada xeebta ee u dhexeysa magaalooyinka Marka iyo Muqdisho. Qaraxan ayaa si gaar ah uga dhacay inta u dhexeysa degaanada Dhanaane iyo Jazeera ee...
Maxkamada ciidamada Ayaa Xukun Ku Riday ilaa Lix qof Magaalada Baladweyne
Maxkamada Ciidamada Ayaa tegtay magalada Baladweyne iyagoo gacan siinayay Mahad Xuseen Shiidow oo maalin ka hor wada bajaajle ku dilay degmada Beledweyn ee gobalka Hiiraan. Khubarro baarayaal ah oo Muqdisho kaga yimid dhacdadan, wakiilna ka ahaa dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa...